हेर्दा शहरमा बसेर सुखी र आनन्द देखिएको यो सहरका ब्यक्तिहरू को पिडा कसले सुन्ने र सहज बनाउने ? काठमाडौंमा जागिर खाने व्यक्तिलाई मानव नगन्ने पवृत्तिका व्यक्तिहरूको अहमता कसले हटाउने ? सामान्य जिविकोपार्जन गर्न कती गाह्रो होला, कसरी व्यवस्था गरेको होला भन्ने कुराको ज्ञान नभएर होला त ?अपुग तलव दिनलाई योग्यता खोज्ने, विज्ञहरू ले नबुझेर होला कि ? बुझी–बुझी बुझ पचाएको होला ?
योग्य व्यक्तिनै चहिने भएपछी किन थोरै बढाएर न्यूनतम तलब दिन खोज्दैनौँ ?अबुझ हुनुहुन्छ भनौँ भने तपाई डिग्री होल्डरनै हुनुहुन्छ । कार्यलय व्यवस्थापन गर्ने उच्च पदका कर्मचारीहरूको योग्यता र अनुभवको अरु कर्मचारीको तुलनामा हजुरहरू निकै अब्बल पनि हुनु होला तर यति धेरै अबुझ किन ? हजुरको तलब अधिक्तम भएर महशुस नभएको हो कि ? कर्मचारी को जरुरी पुरा गर्ने काम मात्र गर्दा संस्थाप्रति सबैको ध्यान कम हुन जाने सम्भावना बढी हुन्थ्यो । यो कुराको स्मरण कहिले गर्ने ?
Private organization हो भनेर निर्धक्कसँग भनिए पनि तलब खुलेर भन्न निकै लज्जास्पद कुरा छ यहाँ । अधिकांश school, college, Bank, industry, Hospital, Departmental store, Star hotel आदिमा काम गर्ने कर्मचारी को असंतुस्टी कसले बुझ्ने याहाँ ? नियम बनेको हुन्छ । कार्यान्वयन नगर्दा कति असर परेको छ भन्ने कुरा कसले जाँच्ने ? महंगी बढेर खान लगाउन गाह्रो भएको कसले बुझ्ने ? वाध्यताले विदेशिएकाकाको मर्म कसले मापन गर्ने ?
दिन प्रति दिन बेरोजगार बनिरहँदा बाध्यतामा काम गर्ने कर्मचारी को कुरा बुझ्ने भन्दा यसको फाइदा लिइरहेको देखिन्छ । हामीहरूको यस्तो चलन बनोस् जहाँ हामी आफ्नो कार्य स्थलको बारेमा कुरा गर्दा गर्ब साथ भन्न पाइयोस् । बाध्यता ले गरेको काम र खुसी ले गरेको काममा धेरै अन्तर हुन्छ ।
राप्रपा एकताः तीन अध्यक्ष, तीन लक्ष्य
गीतामा हातमा राखेर कमल थापाको ’कसम’: अब पार्टी फुट्न दिन्नँ